Soavimbazaha Miarinarivo, Itasy Miha mahazo vahana ny halatra omby
Fanoheran’ny olona ny orinasa Tozzy Green Ahiana ny fifandonana ao Ambatolahy Ihorombe
Nanao fivoriam-be ny vahoaka tao amin’ny kaominina Ambatolahy, any amin’ny faritra Ihorombe ny faran’ny herinandro teo.
Trano lehibe iray ao Ambodivoanjo-Ivandry Mivarina any amin’ny mpifanila vodirindrina ny rano malotony
Mibosesika any an-tanànan’ny mpifanila vodirindrina aminy ny rano maloto avy amin’ny tanàna lehibe iray ahitana tranobe misy rihana maromaro ahofa eny Ambodivoanjo-Ivandry.
NOSY BE HELL VILLE ZAZA 10 TAONA SAIKA HALAINA AN-KERINY
Zazalahy 10 taona no nokasain'ny tovolahy 16 taona ho alaina an-keriny saingy tratran'ny fokonolona tao Belazalaza, fkt Dar-Es-Salam Cr Djamandjar dist Nosy be Hell-ville, ny alin'ny 21 febroary 2020.
Olan’ny Fanabeazana eto Madagasikara Misintona lakolosy ny PASEM
Nanao fanambarana sy antso tetsy amin’ny Complexe Ampefiloha omaly ny eo anivon’ny fiaraha-mientan’ny fikambanana sy sendikan’ny fanabeazana eto Madagasikara na PASEM fa
RN2 sy RN 44 Tsy misy firy intsony ny fanafihana
Nahafa-po ny valin'ny tomban'ezaka vita tamin'ny hetsika natao ho fiarovana ny lalam-pirenena faha-2 sy faha-44 ao anatin'ny Faritra Alaotra Mangoro nandritra ny faran'ny taona 2019
Notafihin’ny dahalo enin-dahy mitam-piadiana ny tanàna iray ao Andranomanelatra, kaominina ambanivohitra Soavimbazaha, distrikan’i Miarinarivo.
Tamin’ny alin’ny zoma teo sahabo ho tamin’ny 9ora sy sasany alina no niseho ny halatra. Omby enina no lasan’ireo dahalo tamin’izany. Nampilaza ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Miarinarivo ny mponina teo an-tanàna izay tsy sahy niatrika avy
hatrany noho ny tahotra ny ain’izy ireo. Nanohy ny fanarahan-dia avy hatrany ireo mponina teo an-toerana sy ireo mpitandro filaminana, raha vao tonga ireto farany izay ary fitaovam-piadiana. Omby telo tamin’ireo enina no najanon’ireo jiolahy teny an-dalana raha ny fampitam-baovao ka ireo ihany hatramin’ny nanoratana ny vaovao no avotra. Mbola mitohy hatrany ny fizahana ireo biby fiompy ireo, nihazo ny avaratra andrefana ny dian’omby. Raha ny filazan’ny mponina any an-toerana, nahazo vahana indray tato ho ato ny tsy fandriampahalemana tamin’iny faritra Itasy iny. Nahomby hatrany ny fiaraha-miasan’ireo mpitandro filaminana sy ny andrimasom-pokonolona, indrindra raha tsy tara ny fampandrenesana ireo mpiaro ny vahoaka sy ny fananany.